Alisson Becker Hal Talaabo Ayuu Aniga Iga Horeeyaa- Goolhaye Ederson Oo Ugu Danbayn Aqbalay In Alisson Ka Fiican Yahay. - GOOL24.NET
Alisson Becker Hal Talaabo Ayuu Aniga Iga Horeeyaa- Goolhaye Ederson Oo Ugu Danbayn Aqbalay In Alisson Ka Fiican Yahay.
October 10, 2018 Mahamoud Batalaale
Goolhayaha xulka qaranka Brazil iyo kooxda Manchester City ee Ederson ayaa ugu danbayn qirtay goolhayaha ay isku xulka Brazil yihiin ee Alisson Becker uu isaga hal talaabo ka horeeyo. Alisson ayaa ah goolhayaha kowaad ee xulka qarankiisa Brazil isaga oo kaydka ku haya Ederson.
Laakiin Ederson oo kooxdiisa Manchester City ka soo caawiyay koobka Premier league xili ciyaareedkii la soo dhaafay ayaa dood badan ka dhex abuurtay jamaahiirta kooxaha Manchester City iyo Liverpool iyada oo midba uu sheeganayay in goolhayaha kooxdooda kan kale ka fiican yahay.
Alisson Beceker oo 26 sano jir ah ayaa Liverpool lacag qaali ah ugu soo biiray xagaagii la soo dhaafay wuxuuna muujiyay in uu isbadal wayn ka sameeyay xalaadii goolhaye ee kooxdiisa Liverpool wuxuuna 32 kulan ka soo saftay xulkiisa Brazil oo uu hadda u yahay goolhayaha kowaad ee aan muranka lahayn.
Goolhaye Ederson oo u waramayay Globo Esporte ayaa sheegay in ay jiraan waxyaabo badan oo ay iskaga mid yihiin isaga iyo Alisson laakiin waxa uu qirtay in waajibaadka xulka qarankiisa Brazil uu Alisson hal talaabo kaga horeeyo.
Ederson oo arimahan ka hadlaya ayaa yidhi: “Waxaan filaaya in ay jiraan waxyaabo aanu labadayadu iskaga mid nahay, isagu xili ciyaareed aad u fiican ayuu Liverpool kaga bilawday. Halkan (xulka Brazil) isagu hal talaabo ayuu aniga igaga horeeyaa, waxa uu ciyaaray koobkii aduunka, Brazil waxay si fiican ugu qalantaa goolhayayaal fiican, kuwa soo galayaa shaqo fiican ayay qabanayaan”.
Goolhaye Ederson ayaa qirtay sida ay wax wayn u tahay in xulka Brazil loo ciyaaro wuxuuna qiray in ay wada qadeeyeen Alisson isla markii uu Liveerpool ku soo biiray wuxuuna yidhi: “Matalida Selecao waa filasho aad u wayn, waxaase ka sii wayn in aad ciyaarto. Waanu wada qadanay Alisson markii uu Liverpool soo gaadhay, waxaanu leenahay xidhiidh aad u fiican, waa saaxiikay isagu”.
Si kastaba ha ahaatee, xulka qaranka Brazil ayaa nasiib u yeeshay in ay wada haystaan laba ka mid ah goolhayayaasha Premier League iyo kubbada cagta ugu fiican iyada oo Ederson uu rajaynayo in kulamada caalamiga ah ee hadda laysku diyaarinayo in uu door ku yeelan karo.